Indlu entsha enamagumbi ama-3 ephangaleleyo efama
Indawo yokuhlala e-Idyllic kwifama embindini wendalo ngombono weentaba. Kude lee kukuphithizela kanye kufutshane nehlathi elihle, elijikelezwe zizityalo, imithi nezilwanyana, yeyona ndawo ifanelekileyo kwabo bafuna uxolo nenzolo nabathandi bendalo.
ikwafanelekile kakhulu kumaxesha e-carantine.
Indawo entsha kraca kwaye inomgangatho ophezulu. Uhlala kunye nathi kwaye ulala ngokwakho kobona boya begusha busulungekileyo - zombini ukugquma kwendlu kunye nebhedi eyenziwe ngoboya begusha inegalelo kumoya opholileyo wokuziva ulungile.
Ukumema, indawo ebanzi kwaye eqaqambileyo yegumbi le-3.5 (i-maisonette) eneendawo ezimbini ezintle ezinelanga / balcony enombono weentaba, ihlathi kunye nemithi yeKrisimesi. Ikhitshi langoku, elivulekileyo elinotshintsho kwindawo yokuhlala kunye neyokutya. Amagumbi amabini okulala aneebhedi ezimbini. Ishawa enye, indlu yangasese, isitya sokuhlambela kunye nebhafu yeshawari enye, indlu yangasese, isitya sokuhlambela. okanye ukuba kukho abantu abaninzi, umgangatho ophezulu unokuqeshwa kubantu aba-3-6.
ukuya kuthi ga kwi 3 abantu 60 .-- / umntu ngamnye owongezelelweyo 20 .--
Oku okwangoku akukho khitshi kunye nezixhobo zococeko, ezinokusetyenziswa kwigumbi
Umnini, uLisbeth, uhlala nezilwanyana ezininzi (iigusha, iinkukhu, amadada, iifudo, iikati) kwaye uyayithanda indalo kwisakhiwo esikhulu. Ivelisa iimveliso zendalo ezahlukeneyo kunye neempahla ezenziwe ngamaplanga. Wamkelekile ukuba uzivumele ukuba ulingwe ubumnandi culinary kwi "Hoflädel" i. ULisbeth unolwazi olukhulu ngezityalo nezilwanyana kwaye wonwabe kakhulu ukukuxelela into malunga nayo okanye ukukubonisa kwindawo ekufutshane.
Uya kufumana endlwini:
- Ukutshintsha itafile kwigumbi lokuhlambela impahla
- Itafile yetafile yabantwana, i-cloakroom yempahla, njl.
- Idotshi kunye nezongezo zebhafu
- Iphepha lethoyilethi
- Imiqamelo yesitulo yebalcony
- Umatshini wekofu osebenza ngeepads okanye umgubo, iibhegi zeti
-Microwave, itoaster, umenzi wesoda, ioveni yeraclette, ifondue yetshizi,
-Iipani ezikumgangatho ophezulu kunye nezixhobo zokupheka, kunye ne-oveni ye-multisteamer
Umatshini wokuhlamba onedrowa yokusika, (uvula ngokuzenzekelayo xa inkqubo iphela)
- iswekile, ityuwa, iviniga, ioli, imifuno entsha,
- Ikofu, iti,
- Wamkelekile ngoku: 1L. Ubisi, ibhotolo, ijam, isonka sesidlo sakusasa sokuqala, - - Isidlo sangokuhlwa esincinci (i-spaghetti kunye nesosi yetamatati eyenziwe ekhaya), - - Imidlalo ehlukeneyo yebhodi kunye nelayibrari encinci yabancinci nabadala.
- Elinye igumbi elikhulu kwi-attic nalo linokuqeshwa, elidityaniswe kwifulethi ngomnyango kwaye linikezela ngeebhedi ezi-2-7 kunye nendawo eninzi yokuzonwabisa kunye nemidlalo. Eli gumbi nako shushu ukukhalela ngokusebenzisa isitovu iinkuni (i CHF ezongezelelweyo 60 ubusuku nganye abantu ukuya ku-2, CHF umntu olongezelelweyo ngamnye-20 / zokucoca umrhumo CHF 50 / igumbi kukho ikhitshi, izindlu zangasese, Lavabo, douche (. Kucetywa ukungena okwahlukileyo)
- I-Whirlpool (i-Jakuzzi) yokusetyenziswa kuphela, ireyithi eyongezelelweyo yeflethi ye-CHF 50
- Ibathrobe kunye neslippers zibandakanyiwe.
- Amaqanda oluhlu lwasimahla kwifama ekwifriji. Isonka, i-plait, ikeyiki, isuphu yenkukhu yasimahla kunye nenkukhu efakwe kwisikhenkcisi.
nceda uyiqaphele kuluhlu lwamaxabiso, hlawula ekuphumeni.
- ukhenketho lwendalo kwindawo eneLisbeth (ixesha kunye neendleko ngolungiselelo)
- Iimveliso ezahlukeneyo zendalo kwivenkile yasefama (i-ointments, itiye, iziqhamo ezomisiweyo, i-jam, isiraphu ...) NgoLwesihlanu ndibhaka kwi-oven yokhuni!
Iindidi zezityalo ezijikeleze intendelezo ikuvumela ukuba ufumane into entsha kwakhona. Ukuba uyanqwenela, ungavumela i-Lisbeth ikutefe ngobumnandi bokutya.
Ngaba uyawuthanda umlilo?I-pergola egqunyiweyo enetafile, ibhentshi, indawo yokosa inyama kunye nebala lokudlala elincinane elisecaleni kwendlu onazo.Ukuba ukhona ngolwesiHlanu, indawo yokubhaka yokubhaka yaseLisbeth inevumba elimangalisayo lesonka esitsha kunye nezinye izibiliboco.
I-Baldeggersee, iSempachersee, ifama yeentlanzi, ibala legalufa, ibhayisekile kunye neendlela zokuhamba intaba zisemnyango okanye zinokufikelelwa ngokukhawuleza!
Ungaqhagamshelana noLisbeth nangaliphi na ixesha (kwisiza okanye ngomnxeba)